Top 6 Thỏi son màu nude nào lên màu đẹp được yêu thích nhất | Muasalebang - Muasalebang
Top 6 Thỏi son màu nude nào lên màu đẹp được yêu thích nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 Thỏi son màu nude nào lên màu đẹp được yêu thích nhất | Muasalebang in Muasalebang
Isitayela esincane esinesitayela saseNtshonalanga Yurophu siya ngokuya sithandwa ngabesifazane. Nenduku i-lipstick Umbala onqunu ofana nebala lesikhumba uzobe ubalulekile kuwo wonke amasaka amantombazane asemfashinini. Thanda imvelo, ubuhle, inhlonipho kodwa awazi ukuthi yimiphi imigoqo enqunu ongayikhetha, akufanele uphuthelwe imigoqo engu-6 ephezulu i-lipstick enqunu Okungumbala odume kakhulu, omuhle ngezansi.
1 Indlela yokukhetha i-lipstick enqunu efanelekile kakhulu
2 Izindebe zomlomo ezinqunu eziphezulu ezingu-6 ezidume kakhulu, ezinhle, ezijwayelekile
2.1 1. INdodana Mac Nikeza
2.2 2. 3CE Ukufiphalisa Indawo Enqunu Yezindebe Eziwuketshezi
2.3 3. I-Lipstick yaseKorea ethengekayo Bbia Last Velvet Lip Tint Version 5 Crystallization 22
2.4 4. Chanel 174 Rouge Angelique lipstick
2.5 5. Iqoqo Le-Son Romand Zero Velvet Tint Shell Beach Nude & Iqoqo Le-Velvet Elibhakiwe eliyimfashini
2.6 6. I-Black Rouge Half N Half Peanut Bad HV01 Indodana
Indlela yokukhetha i-lipstick enqunu efanelekile kakhulu
Ayikhanyi kakhulu noma igqamile njengeminye imibala ye-lipstick, izindebe ezinqunu ezaziwa ngokuthi i-MLBB (Izindebe Zami Kodwa Ezingcono) zigcizelela ubuhle besimanje, obuncane kodwa obukhangayo ngokulinganayo. I-lipstick enqunu icishe ihambisane nawo wonke ama-makeup tones, afanele wonke amacala okusetshenziswa. Ukuze ukwazi ukukhetha i-lipstick enqunu Uma ufanisa umbala wesikhumba sakho nesitayela, sicela ulandele amathiphu ambalwa ngezansi.
Ithoni epholile ephansi (ithoni yesikhumba esibandayo: abantu abanemithambo eluhlaza okwesibhakabhaka nokunsomi) ngokuvamile baphinki abanqunu, ipentshisi elikhanyayo, elifanele labo abanesikhumba esibandayo. I-undertone efudumele (ithoni yesikhumba esifudumele: umkhono oluhlaza) ihambisana kahle ne-lipstick enqunu enombala onsundu, iningi lesikhumba sase-Asia sinalesi sombala. I-undertone engathathi hlangothi (isikhumba semvelo) izosebenza nawo wonke ama-shades anqunu, ngakho-ke ungakhetha ngokukhululekile.
Izindebe zomlomo ezinqunu zivame ukuba nethoni ekhanyayo, ngakho-ke zithinteka kalula ngokushintsha kwezindebe. Amantombazane anezindebe ezimnyama, ezinemibala yezindebe ezigqamile ngokuvamile akuthola kunzima ukumisa imibala ye-lipstick, ngakho-ke kufanele ukhethe i-lipstick enqunu enombala wezindebe ojulile, ofanayo noma o-1 okhanyayo.
Ngaphandle kombala, i-lipstick enqunu yamanje nayo ihluke kakhulu, i-tint inokucwebezela okuphezulu, okuletha ukukhanga ezindebeni. I-lipstick enqunu ye-Matte inamathela kahle, ayikhukhuleki lapho idla futhi iphuza. Noma ungabhekisa ku-Lip gloss, ivelvet…
Ukuhlola i-lipstick kuyisinyathelo esibaluleke kakhulu, umbala we-lipstick owubonayo futhi uma uwusebenzisa ezindebeni zakho nakanjani uzokwenza umehluko. Ikakhulukazi amathoni we-lipstick anqunu, uma engakhethiwe ngokucophelela, kuyoba lula “ukwehluleka” futhi uphambuke ethoni yokwenza izimonyo.
Inkomba: Izindebe ezi-6 ezinhle kakhulu zomhlaba ezibomvu namuhla ukubamba izinhliziyo zamantombazane
Izindebe zomlomo ezinqunu eziphezulu ezingu-6 ezidume kakhulu, ezinhle, ezijwayelekile
Imakethe ye-lipstick enqunu ehlukahlukene yenza kube nzima kuwe ukuthi ukhethe. Uma ungazi ukuthi iyiphi i-lipstick yemfashini edumile futhi ekulungele, ungabheka izindebe ezi-6 eziphezulu. i-lipstick enqunu faka imibala emihle, edume kakhulu ngezansi.
1. INdodana Mac Nikeza
Iyingxenye yomkhiqizo wanamuhla we-lipstick oyintandokazi ephezulu, ukukhetha kosaziwayo abaningi bamazwe ngamazwe, i-Mac Give In iyilipstick yokuqala ye-MAC enqunu okufanele uyikhethe. Vele, intengo yale lipstick izoba phezulu kunezindebe ezidumile zaseKorea naseJapan.
INdodana Mac Ngena ephethe umklamo ojwayelekile wendlu ye-MAC enethoni elula emnyama, emise okwenhlamvu enkulu, kuwubufakazi bomugqa “wokhuni olungcono kunopende omuhle” we-lipstick. Umthamo we-lipstick ungama-3g kuphela, ukubumbana, i-minimalism umgomo i-MAC ebilokhu iwulandela iminyaka engaphezu kwengu-30. Umkhiqizo ungowomugqa we-MAC Amplified lipstick onokuthungwa okunokhilimu we-matte nokucwebezela okumaphakathi.
I-Mac Give In inethoni ephinki yekhorali esemfashinini, edala ukubukeka okumangazayo, okufanela amathoni wokuzilungisa anobukhazikhazi nawowesifazane. Uma uthanda umugqa we-matte lipstick kodwa wesaba izindebe ezomile njengomugqa we-Retro Matte, khona-ke i-Mac Give In lipstick iyisinqumo esihle kakhulu. Umbala uhlala cishe amahora ama-5, awukhukhuleki lapho udla noma ugqoke imaskhi.
Intengo yesithenjwa: 420,000 VND
Funda kabanzi: Izindebe zomlomo ezi-5 ezihamba phambili ezinhle kakhulu ezi-HOT Red Orange okufanele zibe esikhwameni sakho
2. 3CE Ukufiphalisa Indawo Enqunu Yezindebe Eziwuketshezi
Njengomlandeli we-lipstick yaseKorea, igama elithi 3CE cishe “elaziwa”, kusukela ngesikhathi yethulwa lolu hlobo “luhlasele” imakethe ngama-velvet tints aseKorea. Futhi-ke umugqa onqunu we-3CE udume ngokulinganayo, 3CE Isigcawu Sobunqunu Esiyi-Liquid Efiphalisa iyilipstick ezalelwe amantombazane abathanda amathoni anqunu.
I-3CE House ayikaze ibadumaze abathengi ngenxa yesakhiwo sayo sokupakisha, futhi 3CE I-Blurring Liquid Lip Nude Scene Scene lipstick ifika ngendlela eyi-cylindrical stick enethoni yombala ofanayo ne-lipstick, okwenza kube lula ukuthi abasebenzisi bayisebenzise. . Umkhiqizo uyingxenye yeqoqo le-3CE Blurring Liquid Lip elisemfashinini enemibala eyi-10, izithako eziyinhloko ziyi-Dimethicone, i-Polyglycerin, i-Titanium Dioxide, i-Silicon…
I-3CE I-Blurring Liquid Lip Nude Scene iyinhlanganisela yamafomula angu-3 e-lipstick akhethekile: Isihlungi Esifiphalisayo, Umphumela Wokufaka Umbala, I-Fuzzy Powdery Qeda ukuletha i-lipstick enombala opinki onqunu omnene, ophakeme kakhulu, ayibangeli imigqa yezindebe, yenza izindebe ziphuphume futhi zigcwale.
Intengo yesithenjwa: 395,000 VND
Bhekisela: [Review] Ama-lipstick aphezulu angu-5 ahlala isikhathi eside anemibala eshisayo ye-lipstick namuhla
3. I-Lipstick yaseKorea ethengekayo Bbia Last Velvet Lip Tint Version 5 Crystallization 22
Ibheke kulayini we-lipstick othengekayo, lipstick Bbia Last Velvet Lip Tint Inguqulo 5 Crystallization 22 iseqoqweni le-Bbia nude lipstick yaseKorea ongeke uyiphuthele. Ikakhulukazi, lo mbala we-lipstick awukhethi ngesikhumba noqweqwe lwawo, ulungele ngisho nabafundi.
I-Bbia Last Velvet Lip Tint Version 5 I-Crystallization 22 inomzimba omude oyindilinga oyindilinga, umbala okhanyayo omhlophe ukusiza abasebenzisi babone kalula umbala we-lipstick ngaphakathi. Umehluko kule ver5 ikepisi elipinki elikhazimulayo eliyinsimbi, ibhulashi elithambile elimise okwe-teardrop, elisetshenziswa kalula lipstick. Ngalo mbala 22, u-Bbia ungumnikazi wethoni eyinhloko enqunu epinki, enombala osawolintshi kancane, osiza ukugqamisa amazinyo nokugqamisa ithoni yesikhumba.
I-Bbia Last Velvet Lip Tint Version 5 I-Crystallization 22 inamandla okunamathela kumbala kuze kufike emahoreni angu-8, isiphetho esihle, nakuba ingakwazi ukuphuphuma izindebe ezifana nezindebe zaseYurophu naseMelika, ziqinisekisa izinga lombala futhi azikwenzi. induku lapho udla.
Intengo yesithenjwa: 189,000 VND
4. Chanel 174 Rouge Angelique lipstick
Uma ufuna i-lipstick ensundu enqunu ene-European touch, eveza isitayela esiwubukhazikhazi nesihloniphekile osilandelayo, khona-ke Chanel 174 Rouge Angelique lipstick Kuzoba igama elifanele ukubhekwa.
I-Chanel 174 Rouge Angélique lipstick ingeyomugqa we-lipstick osezingeni eliphezulu ovela kumkhiqizo odumile emhlabeni we-Chanel. Idizayini ewubukhazikhazi enegobolondo langaphandle elimnyama eliqoshwe igama lomkhiqizo, isisekelo esinombala osagolide exuding nobility. Umzimba we-lipstick uphrintwe ngosinki we-Chanel logo, oletha izici zawo. Ngokungafani neminye imigqa ye-matte lipstick, i-Chanel 174 Rouge Angélique lipstick iqukethe i-jojoba essence eningi, ngakho inobushelelezi nokuthambile okuthile.
Ithoni ensundu enqunu exutshwe nokukhanya okuphinki ayikhethi kakhulu, ifanele izitayela zokuzilungisa zaseYurophu nezaseMelika. I-Chanel 174 Rouge Angélique inombala omuhle wokunamathela, ithoni efudumele, enqoba ngisho namantombazane asheshayo. Ngemva kokufaka isicelo imizuzu embalwa, i-lipstick izoshiya isiphetho ezindebeni, hhayi ecwebezelayo, hhayi ekudleni.
Intengo yesithenjwa: 850,000 VND
5. Iqoqo Le-Son Romand Zero Velvet Tint Shell Beach Nude & Iqoqo Le-Velvet Elibhakiwe eliyimfashini
Ukuletha ubusha ekwakhiweni, okuvelele nge-lipstick ethambile futhi ebushelelezi, Iqoqo le-Romand Zero Velvet Tint Shell Beach Nude & Iqoqo Le-Velvet Elibhakiwe i-lipstick kazwelonke okufanele yonke intombazane ibe nayo ephaketheni layo.
I-lipstick ye-Romand ihlale ihlaba umxhwele ngokuklama kwayo kobusha nesimanje, ngomzimba we-matte lipstick, umbala ohambisanayo wezindebe, kodwa inguqulo enqunu izoba nesigqoko se-beige esihlukile. Iqoqo elinqunu le-Romand Zero Velvet Tint Shell Beach & I-lipstick ye-Velvet Ebhakiwe Yeqoqo inombala ogqamile we-MLBB namathoni angu-2 ongakhetha kuwo: Ubunqunu obushile kanye Nenqunu Ethosiwe.
Ngokungafani nama-lipstick anqunu aseYurophu naseMelika, imikhiqizo ye-Romand inethoni yobunqunu yobusha, umbala opinki-wolintshi omnene, ofanele labo abaphishekela isitayela sobusha nesiguquguqukayo. Iqoqo le-lipstick ye-Romand Zero Velvet Tint Shell Beach Nude & Iqoqo Le-Velvet Elibhakiwe lihle ezindebeni, hhayi impuphu kakhulu, alibangeli ukunamathela, kodwa ukunamathela kombala cishe amahora angu-4-5 kuphela.
6. I-Black Rouge Half N Half Peanut Bad HV01 Indodana
Nakuba uhlobo luseluncane, kodwa iBlackrouge yigama okukhulunywa ngalo kakhulu, linenani eliphakeme kakhulu lokuthengisa emakethe yaseVietnam namuhla. I-Lipstick Emnyama Rouge Isigamu N Ingxenye Embi Yamantongomane HV01 iyithoni enqunu engavamile yomndeni wakwaBlackrouge okufanele uyizame.
I-Son Black Rouge Half N Half Bad Peanut HV01 inomklamo ongunxande onamakhona ayindilinga, okwenza isici esiyingqayizivele somkhiqizo. Umbala wegobolondo le-lipstick ufana nethoni ye-lipstick, ukukusiza ukuthi ubone imibala kalula, ngaphandle kokushintshanisa noma ukukhumbula ikhodi yombala. Ibhulashi lithambile, libamba i-essensi kahle, futhi lisiza ukusebenzisa i-lipstick kalula. Le lipstick inethoni yemfashini enqunu ewolintshi, kulula ukuyigqoka, futhi igqamisa umbala wesikhumba noqweqwe lwawo.
Ikakhulukazi, ifomula ye-Slim Fit isetshenziselwa ukunikeza ukunamathela kombala okungcono ngaphandle kokoma ngokuphelele isikhumba. Mayelana nephunga lendlu yeBlack Rouge, cishe akunakwenzeka ukugxeka, I-Black Rouge Half N Half Bad Peanut HV01 Iphunga Elimnyama Le-Cherry lithambile, limnandi, alikude kakhulu, alibangeli ukungakhululeki kumsebenzisi.
Nawa amabha angu-6 aphezulu i-lipstick enqunu Imuphi umbala omuhle, izinga elidume kakhulu okufanele wonke amantombazane abe nalo. Umbala we-lipstick enqunu kulula kakhulu ukuwusebenzisa, ulungele izitayela eziningi zokuzilungisa, ngakho-ke ungazizibi lezi lipstick!
Cách làm pizza bằng lò nướng cực kỳ đơn giản | Muasalebang
Review son kem Perfect Diary với bảng màu ấn tượng | Muasalebang